Information for Myanmar about Islam: ဘာသာခြားကမေးရင် ဘယ်လိုဖြေမလဲ (မြန်မာ) အတွက် (၁)
Posted by A Muslim at 4:14 AM
sskyaw1992 March 12, 2012 at 9:51 PM
Ok. Firstly, u said ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ပါးက ဖန်ဆင်းရင် လူလူချင်းမို့ အားလုံးက တူနေရမယ် ဆိုတာက ဘယ်အချက်ကို ဆိုလိုပါသလဲ။ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကွာဟတာလား၊ အသားမဲဖြူ ကွာဟတာလား--၊ ဒါတွေက အလွန်တရာမှ အပေါ်ယံဆန် လွန်းတဲ့ စေဒကသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Do u think is it justavery small case for people? Due to the difference in rich and poor, there arealot of murders in all over the world. Due to those differences, the people in all over the world fight each others, kill each others, jealous each other and they are makingalot of bad deals. If the god created all over the universe, i will told it that u r not kind and wise enough because everyone know that there is more bad guys and bad happening rather than good guys.
“လူ” ဟာ “နွား” မဟုတ်ပါ။ “လူ” ကျောက်ခဲ့ မဟုတ်ပါ။ လူရဲ့ သဘောက အရည်ပြည့် ကျောက်မျက်လို ဖြစ်ပြီး “အရည်ပြည့်သွားတဲ့ လူ” ဆိုရင် ဘာမှ မကွဲ ပြားတော့ပါ။ အရည်မပြည့် မှီ ကျောက်မျက်တွေဟာ သူ့အရည် အ သွေးနဲ့ သူ ရှိနေတာမို့ လူမှာလည်း အရည်မပြည့်သေးတဲ့ လူဟာ သူ့အရည်နဲ့သူ သူ့ဒဂရီနဲ့ ရှိနေတယ်- ဆိုတဲ့ အရည်အသွေးမှာသာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒါဟာလည်း အရည်အသွေးအလိုက် ဖြစ်တည်နေစေဘို့ ပြဌာန်း ချက် ဒဂရီများသာဖြစ်ပါတယ်။ “လူ” ဆိုတဲ့ ဂုဏ်မှာ မတူညီတာများ တွေ့မိပါသလား။ ဆွေးနွေးပေးစေလို ပါ တယ်။
Do u think everyone in the world are qualified people. If so, i ll ask that was Osmar Binladin the good and qualified man for human society? He killedalot of people either same religion with him or not. Is he created by ur god (Allah). It is just an example. Every humans are not the same.
Finally, i think my comment is not insulting to your religion. i m just arguing back to ur paragraphs. I maman who do not accept the Creation theory and also do not accept the religion that frighten the people by the ideology of sin given by the creator. I think it decrease the role of the human. I can argue with all the paragraphs that u written but i cant type Burmese language and those are too difficult to discuss by english language.
If u want to discuss, my acc is sskyaw1992@gmail.com
Man who do not accept the creator.
satuyinga March 13, 2012 at 2:26 AM
အဲ့ဒီလို ရှေ့က ကံကြောင့်ချည်း ဖြစ်တယ်ဆိုရင်- ကျားတစ်ကောင်အတွက် တိရိစ္ဆာန်ဘ၀၊ ငရဲ့ဘ၀က လွတ်ပါဦး မလား၊ သူဟာ ရှေ့ က ကံမကောင်းခဲ့လို့ တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရတယ်- ဖြစ်တဲ့ ဘ၀မှာလည်း သူ့အသက်ကိုချည်း သတ် သတ်ပြီး စားနေရတယ်။ (မြက်စားလို့ လည်း မဖြစ်)-၊ ဒီတော့ သူ့အသက်ကို နေ့စဉ်သတ်ဖြတ်စားနေတဲ့ အကု သိုလ်က ထပ်ဆင့် ထပ်ဆင့် နေ့စဉ် ဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ သူ့သားသမီးတွေကိုလည်း သူတစ်ပါးအသက်ကို သတ်နည်းကို သင်ပေးသေး တယ်။ သူတစ်ပါး " အသက်ကို နေ့စဉ်သတ်တဲ့ အကု သိုလ်ကံ။ သူတစ်ပါးအသက်ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဘို့ သင်ပေးတဲ့ အသက်သတ်ဘို့ လမ်းပြပေးခြင်း အကုသိုလ်ကံ--၊ တွေ ထပ်နေတော့ သူ့အတွက် သုံးဆယ့်တစ်ဘုံမှာ လူ့ဘုံလောက်ကို ဘယ်လိုများ ရောက်ပါတော့မလဲ။ (ရှေးဘ၀ကလည်း ကံ နည်းခဲ့လို့ တိရိစ္ဆာန် ဖြစ်ရပြီ။ အခုဘ၀မှာလည်း ကုသိုလ်ပြုလုပ်ဘို့ အခွင့်အရေးမရှိ- အခုဘ၀ကြောင့် ဆက် တိုက် ဆိုးရတဲ့ ကံက နဂိုက မကောင်းခဲ့တဲ့ ကံပေါ်မှာဆင့်နေတော့- သူဟာ ဘယ်တော့များ မြင့်တဲ့ဘုံတွေဆီကို ရောက်ပါတော့မလဲ။ ယုတ္တိရှိရှိလေး ဆင်ခြင် ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်။ "
အဲဒီအကြောင်း ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ် ဗျာ ပြောမယ်ဆိုတာထက် စာရေးသူကိုယ်တိုင်လေ့လာတာ ပိုအဆင်ပြေမယ် ဗျာ ခု စာရေးသူပြောနေတာ တွေက အပေါ်ယံသက်သက်လေ့လာပြိးပြောပြနေတာထင်ရှားနေသလိုပဲ လူဘဆိုတာဘယ်လောက်ရခဲဆိုတာမှ နားမလည်ရင် ကျန်တဲ့အရာတွေကို ဘယ်ပြောပြရမလဲဗျာ။ နောက် ကွန်ပြူတာစက်ဆင် စရာက ဒီပစ္စည်းတွေးပေါင်းလိုက်ရင် ဒိလိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ သိတဲ့သူမဟုတ်နိုင်ဘူးလားဗျာ။ ။ကွန်ပျူတာထွင်တဲ့သူကရော ဖြစ်စေဆိုပြိးဖန်တိးခဲ့တာမှမဟုတ်တာ ဒီပစ္စည်းက ဒီလိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ် ဟိုပစ္စည်းက ဟိုလိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကိုသိပြိးပေါင်း လို့ သာ ကွန်ပျူတာကြိဖြစ်လာတာလေဗျာ။ အုံဖွ မင်းလူ အုံဖွမင်းတိရစ္ဆာန် မန်းလိုက်တာမှမဟုတ်တာ။
ကဲဗျာ မရှင်းလို့တခုမေးပါဦးမယ် အာလ္လာ ရှင်တော်မြတ်က လူတွေကိုဖန်းဆင်းပြိး မင်းတို့ ကို ဆင်းရဲစေခြင်း ချမ်းသာစေချင်း အစသဖြင့်ပေါ့ဗျာ မင်းတို့၇ဲ့ ကြံခိုင်မှု ကိုစစ်ဆေးတော်မူမယ်လို့ ဆိုတယ် ဆိုပဲ။ ကဲ ဒါဆို သူက ဘာလိုများ လူတွေဖန်ဆင်းတာလဲဗျာ သူမဖန်ဆင်းရင် ကျုပ်ဆို အစစ်ဆေးခံစရာမလိုဘူး မဟုတ်လား ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်း mail နဲ့မေးဖူးပါတယ် ဗျာ
၀န်ခံတယ် ဗျို့ ကျွန်တော် ဘာမှတော့မသိဘူးဗျ
Admin March 13, 2012 at 8:04 AM
အလ္လာဟ်က လူတွေကို ဖန်ဆင်းပြီး ကစားနေသလား ဆိုတာ အောက်က လင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ...
ဇာတ်လမ်းလေးလို့ဘဲထင်ပါတယ်... မဆိုးပါဘူး... စကားအပြန်အလှန်လေးတွေနဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာတစ်ယောက်က ကိုယ်လိုရာကို ရောက်ဖို့အတွက် အကြောင်းတရားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေ ဖန်တီးလိုက်တာပါဘဲလို့ ဖတ်မိပါတယ်.... ဘာသာတရားမှာတော့ သာနာပ တွေနဲ့ ယှဉ်ပြောစရာမလိုဘူးလို့ ခံယူမိပါတယ်... မိမိယုံကြည်ကိုယ်းကွယ်ရာဘာသာဝင်တွေကိုပဲ ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာအောင်ဟောပြောဖို့နဲ့ အဆုံးအမတွေကို လိုက်လျှောက်ဖို့ သွန်သင်ရမယ်လို့ ခံယူပါတယ်။
ဆန်နီနေမင်း March 13, 2012 at 9:22 AM
လောလောဆယ် ဦးဇင်းကျမ်းအတွက် အလုပ်များနေလို့ ပြန်လည်သိချင်တာများကို အားတာနဲ့ ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်။ သို့သော် ကံအကြောင်းကိုတော့ နားလည်အောင် သိထားဖို့လိုတာမှာမို့ ကံအကြောင်းကို ဦးဇင်းဆိုဒ်မှာ သေချာလေး ဖတ်ထားစေချင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာက ကံအကြောင်းတွေသိမှ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပြောဆိုဆွေးနွေးရတာ အဆင်ပြေတာမို့ပါ။
ဥပမာ-ဝေဠုကျော်နှင့်ခိုင်နှင်းဝေတို့ရိုက်ထားတဲ့ ကံဇာတ်ကားထဲကလို ဝေဠုကျော်က သူ့ဟာ မနက်ဖြန်မနက်မှာ မသေနိုင်ဘူးလို့ ဘုရားဟောကံအကြောင်းကို ငြင်းတဲ့အခါမှာ ရှက်တယ်ဆိုတဲ့လူက ကံဆိုတာ ကွေးသောလက်မဆန့်ခင်တောင် သေနိုင်တာမို့ မင့်ကံကိုယုံရမယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ ဝေဠုကျော်က မယုံဘူးဆိုပြီး လောင်းကစားလုပ်ကြဖို့ ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ ရှယ်တယ်ဆိုတဲ့လူက မင့်မနက်ဖြန် တခြားအကြောင်းကြောင့်မသေရင် ငါကိုယ်တိုင်သတ်မယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါကျမှ သူများသတ်လို့သေရင်လည်း သေခြင်းလေးမျိုးထဲမှာပါတာမို့ ကံအကြောင်းကို နားလည်ပါလို့ ပြောလိုက်မှ ဝေဠုကျော်ဟာ ကံအကြောင်းကို နားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း ပြောတဲ့အခါမှာ ကံအကြောင်းကို သေချာနားလည်ထားမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုဖတ်ပြိးသွားပါပြီ တော်တော် စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ။ဒါပေမဲ့ ပို့စ် က မေးခွန်းရဲ့ အဖြေမဟုတ်ဘူး ဖြစ်နေသလိုပဲဗျာ ကျွန်တော်ဥာဏ်တိမ်သလိုပဲ
ပို့စ်ထဲမှာ ကျွန်တော်နားလည်ထားတာက ၁။ အလ္လာဟ် ဆိုတာ ဘာလဲ ၂။လူဆိုတာဘာလဲ ၃။လူတွေတခြား သတ္တ၀ါတွေနဲ့ ဘာကွာလဲ ၄။ ဘယ်လိုဖန်းဆင်းထားတာလဲ ၅။ တမန်တော်ဆိုတာ ဘာလဲ စတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်တွေ ကို အကျယ်ချဲ့ဆွေးနွေးထားတယ် ။နောက် ကျွန်တော်တိုလိုက်နာရမဲ့ အချက်တွေကိုရှင်းပြထားတယ် ကောင်းပါတယ်။ ခက်တာက အဲဒီပို့၇ဲ့မေးခွန်း နဲ့ အဖြေက မကိုက်ဘူး နော် ။သူမေးထားတာ ကအာလ္လာဟ်ရှင်မြတ်က ကျွန်တော်တို့ကို ဘာသဘောနဲ့ ဖန်ဆင်းပြီး ဒီကျမ်းတွေချပြ တမာန်တွေလွှတ်နဲ့ ကစားနေတာလားမေးတာ လို့မေးထားတာပါ။ နောက် ကျွန်တော်မေးထားတာက လဲ ဘာလို့ လူသားတွေ စကြ်ာဝဠာတွေကို ဖန်းဆင်းရလဲ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိချင်တာပါခင်ဗျာ ။ စာရေးသူရေးထားတာ မြင့်လွန်းလို့ ကျွန်တော် နားမလည်နိုင်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ဘာသာတရား ကိုသေခြာနားလည်အောင်လေ့လာပြီးမှပြောပါလို့ တိုက်တွန်းဦးမယ်ထင်တယ်နော် ။နားမလည်လို့မေးပါတယ်ဆိုမှ ပဲ ရှင်းပြလိုက်တော့နားလည်လွယ်တာပေါ့ဗျာ။ နားမလည်နိုင်တဲ့ ကျမ်းတွေချပြ ရွတ်ပြတာ ကဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်လုပ်တာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ် ဗျာ။
Admin March 13, 2012 at 10:59 PM
In this case you admit clearly that you don’t have enough knowledge about other religions which accepts the Creator or Initiator. You just depend on hearsay stories and prejudice about other philosophy. If you want to discuss formally or royalty, you should study about other before go to this field.
I knew that you think what Creator is and when you hear about Creator you feel about like Magician and Dictator, those who say ‘Be’ and it was, right? Under this kind of understanding how can you discuss about Creator or Initiator. In the creation theory, everything going to be systematically, neither like disordered nor unjustified. If the creation theory is presented that it let become something with disorder, who accepts this kind of theory and Creator? Under the theory of creation, everything is going to be step by step with orderly. Can you show me something happen in the worlds which exists with disorderly?
When you don’t fully understand about creation theory, you can point the behavior of human being. Because of the explanation of creation order, human being is selected one, to rule the worlds. That’s why you will find the all kinds of behavior and natural of worlds (animal, stone, tree— etc) in human being. If human being doesn’t own this kind of qualification how he/she knows or absorbs the reflection of others and without absorption of other knowledge how can he/she rules them.
That’s why, the omniscience one appears from the human being, not from animal and others. There are many steps to attain the enlightenment and process is step by step. For example, if you were inventor will you set up the computer at once, or will you set it up step, step.
The Initiator set up the universal law to going to be step by step, it’s called Dhama in Pali which is not disorder. Can you prove that Dhama is disorder?
When I asked you what different one among the human beings, white, black, short, tall and so on, you reply me about the mood or behave of human being. You point that those whose are fighting, those whose own jealous, you should know that only these things are skins, or second step of embryos of pure human being. I will give for example to easy way to understand, three human being one guy from America (white person) when he becomes the saint (Ya-hun-da), and another women from Siri Lanka, (Black women) when she becomes the saint (Ya- hun-da-ma) and the last one from Myanmar he is gay (Brown unisex) but when he becomes the saint (Ya- hun- da), in these step all three human being is equal or not? If different, what are different can you explain me?
The answer is, I think so babyish. I m really surprised when u ask 'Can you show me something happen in the worlds which exists with disorderly? Yes, now only I know that all devastations, catastrophes, flood, famine are all about God's orderly arrangement.
Some more, u says I don't understand creation very well. ok, if u say that i don't understand creation very well, I wonder how u explain Albert Einstein, Richard Dawkins, Carl Sagan, Francis Collins. I think i don't need to to expound the dignities of these people.
As u say White, Black, Short, Tall are no difference in God's eyes, Yes, God is so easy (because he possesses omnis- and omnipo- power) and happy (because he is all-loving)to create these. But i can't imagine how God dare watch Black people being slaved many years and discrimination throughout our history of slavery simply because of his (unwise) creation. I just use 'unwise' instead of 'stupid' because this isaconstructive discussion.
May be, yes, in the end all are the same, but he really neglected the affects and consequences of his creation.
I need to hearabit more (wise explanation) from you.
Admin March 13, 2012 at 11:01 PM
Not only Osmar Binladin but also you and everything are created by Allah. I already explain about spiritual steps of embryos of human being above. I won’t complain about you because of your belief, but when you explain the other you shouldn’t use insinuated language. If you complain about Creator or other religions via seeing one guy or group or some people, you should complain to Buddhism too, because of what happens in 2006, the ruling generals are Buddhists and they built many pagodas, monasteries and they support many of monks, but they beat, kick and killed many monks who are their own people. In this scenario how you consider about Buddhism? If you are non-Buddhism and not the Burmese, you look this disaster from outside, how do you think?
Asareligious person, you should see with right way.
Your examples are not for the religions; these are political and human behaviors. And I am waiting for your discussion next steps.
Admin March 13, 2012 at 11:04 PM
But I don’t want to discuss via your personal email address, it’s not the formal I think.
This is your personal right.
sskyaw1992 March 14, 2012 at 3:15 AM
U said that i m not understand well about creator. Honestly, right i dont understand about them well. But Why so many university nowadays, don't understand creation by God?
Why Einstein don't undrestand creation of God? Why some others famous scientist like Rachids Darwins, Fransis Collins did not understand about creation?
I only asked that why there are some inequality if god created but u asked explained me about the creation. U said creation theory. The thing that i want to know is that why god does not take care even there are some inequality between black and white or others.
if he dont know about it where is his omniscience power. if he know can he beakind god.Even the creation goes systematically or not there should not be inequality. Do u know how black people get trouble due to their colour.
We only focus on the current time. Buddhism is the infinite theory therefore we dont think about the starting. We only think how to stay good in current time and how to finished the birth cycle in the best way. Therefore we do not need to worship any of gods. We regard our Buddha asateacher.
You gave me the example of everybody is the same. There is misunderstanding between us. I meant all the people are not the same coz some of the people have different mind. It is clear that some people have good mind but some are not. But people who know the truth way to disconnect birth cycle can be the siant (ya hun tar) even Buddha. But people who make the human society ugly cannot be saint unless he changed his character.
Finally u told me about our previous shit government. I will told u that MYANMAR GOVERNMENT IS NOT THE ICON OF MYANMAR RELIGION. However, Islamic, Christan , Hindu or Buddish government may be bad but it is not concern with the teaching of religion.
Thank you for explaining the about some of the creation. I m also waiting for ur discussion next step.
ယုံကြည်မှုဆိုတာတော့ ကိုယ်ယုံတာကို ပြောကြတာပါပဲ၊ အထက်ပါ ဘလော့ကို ရေးသူအနေနဲ့ သူများဘာသာကို သေချာလေ့လာပါ၊
ဖန်ဆင်းရှင်က ဖန်ဆင်းတယ်၊ လူဟာ လူပါပဲ၊ ဂုဏ်ရည်အတူတူပဲလို့ပြောတယ်နော်၊ ချမ်းသာဆင်းရဲတွေ ဘာကြောင့်ကွာခြားနေရသလဲ၊ ဘာကြောင့် တချို့က တော်ပြီး တချို့ကဆင်းရဲသလဲ၊ ဘုရားက တော်တော်မျက်နှာလိုက်တာပဲ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုလို့တော့ မပြောပါနဲ့၊ သေချာသိချင်ရင် ဥာဏ်နဲ့သေချာဆင်ခြင်ပါ၊ နောက်ဆုံးပြောရရင် ခင်ဗျားတို့ခြား ဘာတွေလွဲနေလဲတော့မသိဘူး၊ အကြမ်းဖက်သမားတော်တော်များကတော့ သူတို့က သာသနာပြုတာဆိုပဲ၊ ဟုတ်တယ်ဆိုလဲ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့၊ မဟုတ်ဘူးဆိုလဲ သူတို့ကိုရှင်းပြလိုက်ပါဦး၊
သန်းရွှေလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲ နော် ဘုန်းကြီင်္းတွေကိုရိုက်တာမြင်မကောင်းဘူးနော်
လူနဲ့ မူခွဲတတ်ပါစေ။ မိတ်ဆွေကိုတစ်ခုပြောမယ်နော် အာဖရိကမှာမွေးတဲ့ ငတ်နေတဲ့ ကလေးနဲ့ 
အမေရိကန်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ကလေး နှိုင်းယှဉ်ချက်ပေါ့ ကျွန်တော်သိသလောက်ပါအာဖရိကတိုက်မှာ မွေးဖွားခံလိုက်ရတဲ့
ကလေးရဲ့ဘ၀ဟာအင်မတန်မှ ဆိုးပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရ တာလဲ။ ဒီလိ
ဖြစ်အောင် ဘယ်သူလုပ်လိုက်တာလဲ။ ဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲ။
ဒီလိုဖြစ်ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတစ်ချို့က ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို
အပြစ်ပုံချ စွပ်စွဲတာကိုလည်း တွေ့မြင်ကြားသိနေရပါတယ်။
ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် ဒီလိုဖြစ်ရတာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။
တာဝန် အရှိဆုံးဟာ ဒီကလေးရဲ့မိဘများနဲ့
သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူ့အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်က “အာခိရသ်”ဆိုတဲ့
“အနာဂါတ် (Future)” ကိုမလွဲမသွေ ယုံကြည်ရပါတယ်။ မိမိရဲ့နောက်မှာ
မိမိထံကပေါက်ဖွားလာမဲ့ သားစဉ်မြေးဆက် များဟာလည်း
မိမိရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်တွေ ကောင်းဖို့ မိမိမှာမွေးရာပါတာဝန်အရလည်းကောင်း
အစ္စလာမ့်ယုံကြည်ချက်ဆိုင်ရာ တာဝန်အရလည်းကောင်း လုံးဝ တာဝန်ရှိပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ လူသားတွေဟာ ကြိုးပမ်းရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။
ဘာအတွက်ကြောင့်လဲ။ မိမိ အတွက်လည်းဖြစ်သလို
ကျွန်တော်တို့သားသမီး တွေမျက်နှာမငယ်အောင် ဆင်းရဲကြပ်တည်းခြင်းမဖြစ်အောင်
ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့ ကွယ် လွန်သေဆုံးသွားရင်
ကြီးပွားတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေပြီလေ။ အာဖရိ ကတိုက်ကအုပ်ချုပ်သူအများစုက
ကောင်းစားရေး ထက်သူတို့အာဏာတည်မြဲရေး သူတို့ကောင်းစားရေးကိုပဲ
လုံးပမ်းနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အမေရိကန် သမ္မတကြီးရဲ့သားမပြောနဲ့။
ရိုးရိုးသာမန် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တောင် ဘယ်လိုယှဉ်မလဲ။
Hein Zaw March 27, 2015 at 7:50 PM
အထက်ပါ ဘလော့ကို ရေးသူအနေနဲ့ သူများဘာသာကို သေချာလေ့လာပါ၊ မရေးခင် ကိုယ်ရေးမဲ့ အကြောင်းအရာကို သေချာလေ့လာဖို့လိုပါတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဖန်ဆင်းရှင်က အရာရာကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာလောက် နားလည်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး၊ သေချာလေ့လာပြီးမှ ဥာဏ်နဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားရတာပါ၊ သေချာလေ့လာပါ၊ လူဟာ အ၀တ်လဲရုံနဲ့ ရှိခိုးခံထိုက်သလား ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိန်းမတစ်ယောက်က ရန်တွေ့နေသလို ဖြစ်နေပါတယ်၊ ရဟန်းဖြစ်ရင် ဘာတွေစောင့်ထိန်းရတယ်၊ ဘယ်လိုအပြစ်လုပ်ရင်း ဘယ်အာပတ်သင့်တယ်ဆိုတာ ရှိပြီးသားပါ၊ ဒီထက်ပြောစရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်၊ ပြောချင်တာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို တိုက်ခိုက်ချင်ရုံမဟုတ်ဘဲ တကယ်လေ့လာချင်ရင် ဦးနှောက်ကို ဖွင့်တွေးဖို့လိုပါတယ်၊ အကုန်လုံးက ဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်ဆိုတာလောက် မလွယ်ပါဘူး
Hein Zaw March 27, 2015 at 7:52 PM
THU RA March 14, 2012 at 8:34 AM
အင်း သစ္စာတရား၊အလ္လဟ်ဆိုတာကို လူတွေကို ဒီတိုင်းရှင်းပြလိုက်တိုင်းသာ သိနိုင်မယ်ဆိုရင်
ဘုရားတွေပွင့်ခဲ့တဲ့ ခေတ်တုင်းမှာဘာသာခြား အယူကွဆြိုတာ ရှိမှာတောင်မဟုတ်ဘူးလေ။
ဘာသာတရား ရဲ့မူရင်းတွေကို အထပ်ထပ်လေ့ကျင့်နေသူတွေတောင် သဘောမပေါက်နိုင်သေးတာ အမျာားီ့းရှိနေသေးတယ်။ဘာမှမလေ့လာရသေး၊မကျင့်ကြံရသေးတဲ့သူတွေက ဒီလိုမေးခွန်းတွေမေးလိုက်
ဖြေလိုက်လုပ်နေတာလောက်နဲ့ သစ္စာတရားကိုသိနိုင်မယ်ဆိုရင်(သို့မဟုတ်)လူသားတိုင်းကို စကားနဲ့ပြောပြတိုင်းသာ သစ္စာကိုသိနိုင်မယ်ဆိုရင် တရားစခန်းတွေ ဆွလာဟ် ၀တ်ပြုမှုတွေ
ဆိုတာ ဘာလုပ်နေမှာလဲ ဗျာ ထိုင်ပြီး မေးမြန်းနေလိုက်ကြမှာပေါ့။
သစ္စာတရား ဆိုတာ အလ္လဟ်ဆိုတာ မေးနေယုံနဲ့မပြီးဘူး။
ရီလေးတစ်ဗတိကိုတောင် လူတိုင်းနာမလည်နိုင်တာ အရာရာရဲ့ဇစ်မြစ် အစ၊အရာရာကို ဘက်လွမြသွားအောင် ထိန်းညှီပေးနေတဲ့အရာ။အမြဲမှန်တေဲ့အမှန်တရားတွေကို မဖောက်ပြန်အောင် ထိန်းညီ တိကျမှန်ကန်နေစေတာတွေက လူသာမန်တိုင်းက နားလည်ပါ့မလား။တစ်ယောက်နဲ့မှမတူတာ။
ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း၊နားလည်နိုင်စွမ်းအားတွေလည်းတူမှမတူတာ။ကွန်ပြုတာတစ်လုံးရဲ့အစ ဖြစ်တည်စေတဲ့အရာကိုသိသွားရင် ကွန်ပြူတာကို ဘာလို့ဖန်တီးထားလဲဆိုတာ သူက သိစေလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှ သူ့က သူဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကို သိစေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မှာပေါ့။
နှစ်ပေါင်း ထောင်ကျော်တည်တံ့ပြီး ဒီနေ့ထိ လူဦးရေ သန်းချီနေတဲ့ဘာသာတရားတွေကို စာအုပ်လေး ၁၀ အုပ်ကျော်လောက်ဖတ်ဘူးယစောဒက တက်နေရင်တော့ ဟုတ်ပါ့မလား။
ဘယ်သူမှမလုပ်ပဲ သူ့ဘာသာ ဖြစ်လာတာဆိုတာက ပိုလွယ်မှာပါ။
ဖန်ဆင်းရှင်မရှိပဲ ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကလည်း ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကျ ဘယ်သူမှ မဖန်ဆင်းပဲ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကို လက်ခံကြတယ်။
ဘယ်သူမှ မဖန်ဆင်းပဲ လောက ဒီတိုင်းဖြစ်လာတာပါဆိုတာကိုလက်ခံသူတွေကလည်း အလ္လဟ်ဆိုတာက ဘယ်သူမှ မဖန်ဆင်းပဲ သူ့အတိုင်းတိုင်း တည်ရှိနေတာပါဆိုတော့ လက်မခံနိုင်ကြဘူး။
satuyinga March 14, 2012 at 7:56 PM
Anonymous March 15, 2012 at 4:29 AM
satuyinga မေးတဲ့အတွက် တင်ပေးလိုက်တာထင်တယ်........
Anonymous March 18, 2012 at 5:42 AM
ဦးသူရိယ ဧ။် anonymous သို့ reply
Anonymous March 18, 2012 at 5:48 AM
ဇီဝက March 17, 2012 at 7:23 PM
Anonymous က ပြောတဲ့ အဖြေက အတော်လေး စောဒက တက်စရာပဲ။ နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်။ အသွားဘူးသေးလို့ မသိသေးတာ ဟုတ်လား။ အခြားဘာသာတွေက ဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်။ သေချာ မယုံသေးလို့ မသိသေးတာလို့ ပြန်ပြောရင် ဘယ်လို ဖြေမလဲ။
(၂) သုတ်ပါထိက၀ဂ္ဂပါဠိ အဂ္ဂညသုတ်မှာ- ကမ္ဘာမှာ လူတွေ ဖြစ်လာပြီးမှ လူတွေတောင့်တလို့ နေ၊ လ ဖြစ်လာရတာလို့ ပြောတယ်။- လောဆယ်-၊ ဒါလေးကို ယုတ္တိနဲ့ ကိုက်မကိုက် အရင်ရှင်းကြည့်ပါ။ အဲ့လောက်တောင် မသိခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက မမြင်ကွယ်ရာရှိ နိဗ္ဗာန် ရှိတယ်လို့ ပြောတာကို ဘယ်လိုအင်အားနဲ့ ယုံကြည်သင့်ပါသလဲ။
နောက်တစ်ပိုဒ်ချင်း သွားတာပေါ့နော်။ ကိုအနော်နိမာ့စ် ပြောသလို ပိဋကတ်ထဲက တိုက်ရိုက်ပြောလိုက်တာလေ။ ကိုယ်ပိုင် ဘာသာပြန်ပြီး ရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကုရ်အာန်ကျမ်းက ပြောလာရင်လည်း ကိုယ်ပိုင်ဘာသာပြန်ပြီး ရှင်းခွင့်ပြုပါ။ (ကိုယ်ပိုင် ဆိုပေမယ့် အထောက်အထား ရှိရမယ်နော်၊) ဘယ်စာလုံးက ဘယ်လိုဆိုတယ် ဆိုတဲ့ တိကျတဲ့ အဘိဓာန်၊ ကျမ်းကိုး ရှိရပါမယ်။ ကိုအနောနိမာ့စ်ရဲ့ ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးဘို့ ဖိတ်ခေါ်မှုကို ကြိုဆိုလျှက်-
ဆန်နီနေမင်း March 18, 2012 at 3:18 AM
ဦးဇင်းကို ထပ်ဆင့်မေးထားတဲ့ မေးခွန်းများကို ဦးဇင်းအသိဉာဏ်ရှိသမျှ ထပ်မံဖြေဆိုပေးထားပါတယ်။ ဦးဇင်းဆိုဒ် http://www.sanninaymin.com/2012/03/blog-post_18.html မှာ တင်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။
ဇီဝက မှ anonymous သို့ reply
ဆရာဇီဝက က နေတို့လတို့ အကြောင်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်နဲ့
တူတယ်၊ အင်းပေါ့လေ ခင်ဗျားတို့ကျူပ်တို့ငယ်ငယ်က အဲဒီအကြောင်းတွေ သိပ်များများစားစားမှ သင်ခဲ့ရတာမှမဟုတ်တာ။ ၂၃ နဲ့ ၂ ပိုင်း ၁ပိုင်းလောက်ပဲသင်ခဲ့ရတာကိုး။ ဒါမှမဟုတ် ကျနော် က ဗုဒဟောတဲ့ ကျမ်းဂန်တွေထဲက ဟာတွေ လျှောက်ပြောနေရင် ဘယ်တုံးက ဘယ်နေရာမှာ ဟောတာလဲ ဆိုတာတွေ၊ သူက ဘယ် ကိရိယာနဲ့ တိုင်းတာပီးဟောတာလဲ ဆိုတာတွေ လာအုံးမယ် အဲ..လ တို့ နေတို့ ဆီကို ကျနော်ကိုတိုင် ရောက်ဖူး ရင်တော့ ဆရာဇီဝကတင် မကဘူး ဘယ်သူ လာ အင်တာဗျူးဗျူး ကျနော်က ပြန်ဖြေပြမှာပါ။ မတွန့်တိုပါဘူး။ နိဗါန်ကိုတောင် ကျနော် မရောက်ဖူးသေးလို့ မယုံသေးဘူးလို့ ကျနော်ပြောပီးပီပဲ၊ ဒီတော့ လက်တွေ့ ကျတဲ့၊ လက်လှမ်းမှီတဲ့ ကိစ်စလောက်ပဲ ဆွေးနွေးတာ ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဗုဒ ဟောသွားတဲ့ဟာတွေကို လျှောက်ပြောနေရရင် ပီးမှာမှုတ်ဘူး၊ အခြေခံထင်သာမြင်သာတဲ့၊ အခု ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့လက်တွေ့ဘ၀နဲ့ စပ်ဟပ်မိမယ် ကိစ်စလောက်ပဲဆွေးနွေးတာ ကောင်းမယ်ထင်တယ်၊ အဲ ဘာသာတစ်ခုကနေတစ်ခုကို ပြောင်းတဲ့ကိစ်စက တကဘာ လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ချီရမှာဆိုတော့ တစ်ယောက်၂ ယောက်လောက်ကို pick up လုပ်လို့ ရတာမှုတ်ပါဘူး၊ အဲလိုပြောကြေးဆို ဆိုမားလီးယားက Ayaan Hirsi Ali က မွတ်စလင်အစစ်ပဲ၊ အခုကိုယ့်ဆရာပြောတဲ့သူတွေထက် ပိုနာမည်ကြီးသေးတယ်။ circumcision တို့ female genital cutting တို့ စက်ဆုပ်လွန်းလို့ တော်လှန်လိုက်တာ တကဘာလုံးမျက်လုံးတွေ သူ့ဆီရောက်သွားတဲ့အထိ၊ အခုထိလိုက်အင်တာဗျူးနေကြတယ်၊ မွတ်စလင်ဆရာကြီးတွေနဲ့တောင် debate တွေပြန်လုပ်နေတယ်။ ကိုယ့်ဆရာမယုံရင် သူ့wiki ကို သွားကြည့်၊ ဒါနမူနာတစ်ခုပြောတာနော် လူတွေအများကြီးပြောရမှာ ကြာလွန်းလို့။ ခင်ဗျားပြောသလို web site တစ်ခုကို လက်ညိုးထိုးရမယ်ဆိုလဲ၊ http://www.thereligionofpeace.com/ အဲမှာသွားကြည့်ဗျား၊ Islam ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်တဲ့
ဘာသာတစ်ခုပါ လို့ သူ့သွားပြောလို့တဲ့ဗျား၊ အဲဒီဘိုးတော်က အဲနာမည်နဲ့ ဒီဆိုဒ်ကို ထ ထောင်တာ။ အခု ကိုယ့်ဆရာပြောတဲ့ ကနေဒါမှာတင် မွတ်စလင်၊ ခရစ်ယာန်ကနေ atheist ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေ ခင်ဗျားပြောသလို တစ်ယောက်ချင်း
နှစ်ယောက်ချင်း ပြောမနေဘူး တင်းတောင်းနဲ့တောင် ကြုံးယူလို့ရတယ်။
အဲ ..ဘာကြောင့် ဒီကောင်တွေဗုဒဘာသာဖြစ်မလာလဲတော့မမေးနဲ့၊ ဗမာပြည်မှာနေတဲ့ ဆရာဇီဝကတောင် ဗုဒဘာသာနဲ့ နီးနေပေမယ့် ဘာသာဝင်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးမှုတ်လား၊ ဒီကောင်တွေဆို ဝေးရောပေါ့။ ကုန်အာန်ကျမ်းကို မီးရှို့တာနဲ့ ဗုဒဘာသာကို စော်ကားတဲ့ Rude Buddha နဲ့က ပုံစံချင်းမတူပါဘူး။ ဒါတင်မကသေးဘူး apple က အိုင်ဖုန်းကို ဗုဒဆင်းတုတော် လက်ဝါးထဲမှာထည့်ပီး ကြော်ငြာတာရော
စော်ကားတယ်ထင်ကြမှာပဲ။ ကိုယ့်ဆရာ psychology ကို လေ့လာမှုအားနည်းသေးတယ်ထင်တယ်၊ သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါအုံး၊ လူတွေက ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ တွေးအခေါ်ကို သိပ်ဘ၀င်မကျဖြစ်လာ၊ ဗုဒက ရဲ့ အတွေးအခေါ်ကလဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူတို့ကြားမှာ ရေပန်းစားလာတော့၊ နာမည်ကြီးချင်သူတွေက ဗုဒနာမည်ကို တလွဲလုပ်ပီး သုံးကြမှာပေါ့။ ဒါကို ဗမာပြည်က ဗုဒဘာသာဝင်တွေက ရိုင်းစိုင်းတယ်ထင်ကြတာပါ၊ အဲ ကုရ်အာန်ကို မီးရှို့တာကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါ၊ ဆရာပြောသလို မနိုင်လို့ ၇မ်းတဲ့သဘောပါပဲ ဘင်လာဒင်ကို မုန်းလဲမုန်း မနိုင်လဲမနိုင်လို့ သူတို့ ရမ်းတာပါ၊ တနည်းအားဖြင့် ဆန်ဒမှန်ကို ဖော်ထုတ်ကြတာပါပဲ၊ အဲ နိုင်သာနိုင်ရင် သူတို့ဆန်ဒ က ဘင်လာဒင်တင်မကဘူး အလ္လာဟ် ကိုပါ သူရှိတဲ့နေရာကို သိရင် တွေ့ရာသင်္ချိုင်း ဓါးဆိုင်းမှာမှုတ်ပါဘူး။ ကျနော်ပြောတာ မှန်မမှန် ကြည့်လေ၊ သူတို့ ဘင်လာဒင်ကို ကဘာမြေပြင်ပေါ်က ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရအောင်ရှာပီး သတ်သွားတာက သက်သေခံနေတာပဲ။ ကျုပ်ကဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာ အဲလောက် အသေးစိတ်ဆွေးနွေးတာနော်၊ ဆရာ့လို ကိုယ်မနိုင်တာလေးတွေ ချန်ထားပီး ဟိုနားတတို့ဒီနားတတို့ လိုက်မလုပ်ဘူး၊ အဲလိုလုပ်တာလောက်နဲ့က ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ ဦးနှောက်တွေ ပွင့်လင်းလာမှာမှုတ်ဘူးလေ၊ အဲ ဆရာဇီဝက မေးတဲ့ နေတို့လတို့က ကျနော်အစ ပျိူးခဲ့တာတွေမှုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ဆရာသိချင်ရင် အဲဒီအစပျိူးခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ဆန်နီနေမင်း ဆိုဒ်မှာ အဲဒီမေးခွန်းတင်မကဘူး တသီတတန်းကြီးဖြေထားတာ အများကြီးပဲ၊ လွယ်လွယ်လေး၊ အထက်နားမှာ သူ့ဆိုဒ်ပြောထားတာရှိတယ်၊ သူကတော့ philosophy တက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးပဲ။ ကျုပ်အတွက်ကတော့ ဘုရားသခင်ကို နားလည်ဖို့ ဖီလော်ဆော်ဖီ တက်ဖို့မလိုဘူး၊ အထူးအဆန်းလေးတွေ တွေ့တိုင်း ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာလို့ တွေးကြကြေးဆို နယူတန်တောင် ဟိုး..၁၆-၁၇ ရာစုကထဲက ပန်းသီးကြွေကျတာ ဘုရားသခင်ကြောင့်လို့ တွေးခဲ့မှာပေါ့။ သူတောင် သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိရမယ်လို့ တွေးခဲ့တာပဲ။ ခင်ဗျားတို့ကျူပ်တို့က ၁၆ရာစုက ချာတိတ်တွေမှ မဟုတ်တော့တာ။ အဲ ကျနော် ပြောတဲ့ အချက် တွေကိုတော့ ကိုယ့်ဆရာတစ်ခုမှ ပြန်မဆွေးနွေးသေးဘူးနော်။
kozay79 April 14, 2012 at 11:04 AM
ကိုယ့်ဆရာ တို့နမာဇ်ဖက် ပျက်ဝပ်နေတဲ့ဘုရားဟာ ဘာလူမျိုး ၊ ဘယ်အမျိုးအနွယ် ၊ဘယ်ပုံရှိတယ်ဆိုတာ
တောင်မသိဘဲ ဗုဒရဲ့ ဂုတ်ရည်နဲ့မတုပါနဲ့ ။သဘာဝတရားကို သူလုပ်သယောင်ယောင်ပြောနေတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်
မှန်းဆဘုရားဟာ အငြင်းပွားစရာကြီးပါ။ကုရအာန်မှာအမှားတွေအများကြီးရှိတာ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်မနေနဲ့လေ။ကွန်ပျူတာတစ်လုံးပြုလုပ်သူဟာ တစ်လုံးတည်းထုပ်ပီး ပီးပြည့်စုံသွားတာလား
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွေ ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူတွေအများကြီး တီထွင်သူတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်။ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဖြစ်ဖို့
တီထွင်သူတွေ ဘယ်လောက်ကျိုးစားခဲ့ရသလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဆရာတွေးပါ အဲဒီမှာ ကံကံ၏အကျိုးကိုမြင်လာမှာပါ
ayesaylayy May 25, 2012 at 10:58 AM
(၁) နိဗာန်ရှိတယ်၊ အဲနေရာကို သွားလို့ရတဲ့ လမ်းကြောင်းကို လဲ မလွဲအောင် ပြထားတယ်၊
ဟုတ်ပြီ။ သံသရာဆင်းရဲကလွတ်မြောက်မှု့က နိဗာန် ပေါ့။ ဆိုလိုတာကသံသရာကဆင်းရဲဘုံပဲ။ ဒီတော့မရေတွက်နိူင်သော သက်ရှိတွေကဘာကြောင့်များသံသရာထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ပြီး ဆင်းရဲလာခံရတာပါလိမ့်။အခုအကိုတို.ကျနော်တို.ကဘာအပြစ်လုပ်မိလို. သက်သက်မဲ့ ဒီသံသရာထဲဝင်လာရတာလဲခင်ဗျ။ မသိခြင်း၊ အမိုက်မှောင်ကြောင့်စွဲလမ်းမှု့ဖြစ်ပြီးခြင်းကြောင့်ပါလို.တော့မဖြေနဲ့နော်။ အဲဒါကသံသရာကမလွတ်မြောက်တဲ့အကြောင်းရင်း၊ သံသရာထဲကိုဝင်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းအဖြေလို.တော့ပြောရင်တလွဲတွေဖြစ်ကုန်မယ်။ ကိုယ်လဲဘာအပြစ်မှမလုပ်ရပဲ၊ သံသရာမှာလာကျင်လည်ရတယ်ဆိုတာကြီးကသံသရာဟာဆင်းရဲလို.အကိုလက်ခံထားရင် ကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ သက်ရှိဖြစ်တည်နိူင်ဖို.ဆိုတာသန်:ချီသော လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်။ အဲဒီလိုအပ်ချက်တွေမရှိပဲသက်ရှိဆိုတာရှိမလာနိူင်ဘူး။ ဒီတော့အဲဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာဟာသဘာဝဆိုရင်အဲဒီသဘာဝကိုအပြစ်တင်လိုက်ပါ။
ayesaylayy May 25, 2012 at 11:09 AM
သိပံနဲ့ ကိုက်တယ်ဆိုပြီးဘာသာတရားတိုင်းကကြိုးစားသက်သေပြနေတာပဲ။အပေါ်ကနေ၊လ၊လူ ကိုရှင်းကြည့်ပါဦး။ science က အဲဒီခရီးကိုတော့ရောက်ပြီးပါပြီ။ ပြီးတော့ အက်တမ်ကအငယ်ဆုံးဆိုတာ ဘယ်သူကပြောလို.လဲ ။sub-atomic particles တွေမှတပြုတ်ကြီး။ အစ်ကိုပြောတဲ့ပိုငယ်တဲ့အရာတွေက science ကလိုက်မမှီသေးတာဆိုရင်၊ ဟို ယူဇနာဘယ်လောက်ရှိတဲ့တောင်ကြီးကကော ၊ ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်။
ayesaylayy May 25, 2012 at 11:19 AM
ဖန်ဆင်းရှင်၊ ရှိနိူင်မရှိနိူင်ကို science ကို tool တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချမယ်ဆိုရင် ဝမ်းမြောက်စွာဆွေးနွေးသွားပါမယ်။
A Muslim May 26, 2012 at 10:35 PM
(၁) ပညတ်နဲ့ ပရမတ်ကို ခွဲခြား သိမြင်ရင် ဂေါတမနဲ့ ဗုဒ္ဓ ဆိုတာကိုလည်း ခွဲခြား သိမြင်လာလိမ့်မယ်။- ပညတ်နဲ့ ခွဲခြား သိမြင်နိုင်မှု မရှိရင် လေ့လာလိုက်ပါဦး။ ပုဂ္ဂိုလ်၊ မျိုးနွယ်၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ အကျင့်၊ ပါရမီ ဖြည့်ဆီးခြင်း ဆိုတာတွေက ပညတ်နယ်ထဲက ကိစ္စတွေ ဖြစ်တယ်။ ပရမတ်ကို နားမလည်သေးသူကို အလ္လာဟ်ဆိုတာ နားလည်စေဘို့ ဆွေးနွေးရမှာ အဝေးကြီး ကျန်နေပါတယ်။ ဆက်လက်လေ့လာပါ။ ပညတ်နယ်ထဲက ကိစ္စကိုပဲ အရင်ဆွေးနွေးပါ။ တစ်ကယ်လို့ ပရမတ်ကို တစ်ကယ်နားလည်ရင် ဗုဒ္ဓ ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖြစ်ခံယူထားတဲ့ မိတ်ဆွေကပဲ အရင်ရှင်းပြပါ။
(၂) ကုရ်အံထဲက အမှားတွေ အများကြီး ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ အများကြီးထဲက တစ်ခုလောက် ကို ယုတ္တိရှိရှိ ဆွေးနွေးပေးစေလိုတယ်။ ကြိုဆိုနေမှာပါ။ မိတ်ဆွေရဲ့ ဆွေးနွေးမှုက ယုတ္တိရှိနေရင် ကျွန်တော့ ဘက်က အစ္စလာမ်ကို လက်ခံထားခြင်းမှ ရုပ်သိမ်းပေးပါမယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ ဆွေးနွေးမှုက ယုတ္တိမဲ့နေရင်- နောက်နောင်မှာ ကုရ်အံထဲမှာ အမှားများ ရှိတယ်လို့ မပြောတော့ပါဘူး ဆိုတာ လောက်ပဲ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
(၃) အရာရာတိုင်းမှာ ကံကိုချည်း ထိုးမချနဲ့ ဆိုတဲ့ အင်္ဂုတ္ထိုရ်ထဲ ရှင်ဂေါတမ ပြောတဲ့ စကားကိုတော့ မိတ်ဆွေ လက်မခံဘူး ထင်တယ်။ (ဒီလိုဆိုရင် မိတ်ဆွေက ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတောင် မကျေညက်သေး ပဲ)။ ကုရ်အံကို သေချာအောင် မလေ့လာသေးဘဲ-၊ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွေသီအိုရီကို အစ္စလာမ်က လက်မခံဘူးလို့ ကြားဘူးနားဝ မပြောသင့်ပါ။
(ဆွေးနွေးလိုရင် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် ဆွေးနွေးမှုနဲ့တူတဲ့ ဆွေးနွေးမှုမျိုးနဲ့ ဆွေးနွေးလိုပါ တယ်။)
မေမြို့မိုး July 30, 2012 at 2:05 PM
အရာရာ ကံကို ပုံမချသင့်ပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရ ကိုက ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးကိုယုံကြည်သက်ဝင်တာပါပဲ.။ ချမ်းသာတဲ့ဘ၀ ၊ ဆင်းရဲတဲ့ဘ၀တွေထားဦးတော့.
အလုပ်လုပ်တာ ၊ အလုပ်မလုပ်တာ ထားဦးတော့. ၊ လူနှစ်ယောက် ကားစီးသွားတယ်.။ ကားမှောက်တယ်..၊ တစ်ယောက်က ပွဲချင်းပြီးသေတယ်.။ တစ်ယောက်က လက်တစ်ဖက်ပဲကျိုးသွားတယ်.။ ဒါကျတော့ ဘာကို ဘယ်လိုယူဆမလဲ.။ ဒါကရော
အလ္လာဟ် ရဲ့ အလိုတော်လို့ပဲဆိုမှာလား.။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကျတော့ အတိတ်ဘ၀က သူ့ရဲ့ မကောင်းမှု ကြောင့်. ၊ သူတပါးအသတ်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်
ဒီလူက ပြန်လည်ခံစား၇တာ လို့ ဆိုတယ်.။ အသက်သတ်တဲ့သူက အနာရောဂါထူမယ်..၊
ခွန်အားနည်းမယ်.၊ အသက်တိုမယ်.၊ သူတစ်ပါး သတ်ဖြတ်တာကိုခံရမယ်.။ ဒီလို ပြန်ခံစား ရမယ် လို့ယုံကြည်တယ်.။ ဒီဘ၀ မှာမိမိပြုတဲ့ကံဟာ နောက်ဘ၀ ဒါမှ မဟုတ် နောင်တစ်ချိန်မှာ မိမိ ပြန်ခံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နောင်ဘ၀အတွက် မျိုးစေ့လို့လည်းဆိုကြတယ်.။ ကြွေးသစ်ချတယ်လို့လဲ ဆိုကြတယ်.။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့က နောင်တစ်ချိန်အတွက် ဒီဘ၀မှာ မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုးကြတယ်.။
ပြုသူအသစ်၊ ဖြစ်သူ အဟောင်းဆိုတဲ့စကားကလည်း ဒါကိုဆိုလိုတာပါပဲ...။
ဒီဘ၀မှာ ပြုနေသူက ကံအသစ်ကို စီမံနေတာဖြစ်ပြီး.၊ သူဖြစ်နေရတဲ့ဘ၀ကတော့
ကံဆိုတာဘာဘာညာညာမဆွေးနွေးပါနဲ့ ဆိုပါစို့ ဂေါဒမ က မိမိအကျိုးသူတပါးအကျိုးထိခိုက်စေရင် အကုသိုလ်လို့ဆိုထာတာပဲ သတ်ဖြစ်ပြီး ကုသိုလ်လုပ်တယ် ယူဆနေသူတွေနဲ့ စကားပြောတာငြင်းခုန်တာဟာ ဖန်ဆင်းရှင်အလိုကျပဲ သူက၀ါဒမျိုးစုံ ဖန်ဆင်းထားတာ လူတွေရန်ဖြစ်ကြပြီး နေမှသဘောကျတာဗျ ကျုပ်တို့ဆို သတ်နေကြရတာ မြင့်မြတ်တဲ့ စစ်ပွဲမှာပေါ့